Noweyi - ALinks
Mabhangi akanakisa muNorway
Dai 7, 2022 Demi Banks, Noweyi
Mabhangi epamusoro muNorway ndeaya: Bank Norwegian AS DNB Bank Luster Sparebank Storebrand Bank ASA Sparebank 1 SMN. Iyi ndiyo mhedziso yemabhangi akanakisa muNorway. Mabhangi epamusoro muNorway Mabhangi muNorway anosanganisira 17 mabhanga ekutengesa,
Maitiro ekuvhura account yekubhengi muNorway? Nhungamiro yekukurumidza yevatorwa uye vekuNorwegi
Dai 4, 2022 Demi Banks, Noweyi
Iwe unofanirwa kuvhura akaundi yekubhangi uchangosvika muNorway. Kunyanya kana iwe uchironga zvekugara kweinopfuura mwedzi mitanhatu. Mushure mekugamuchira muhoro wemubhadharo, iwe zvakare unozogona kushandisa yako mari. Semagumo
Nzira yekuwana sei visa kuNorway?
January 10, 2022 Demi Noweyi, visa
Kuronga rwendo kuenda kuNorway, saka padanho rekutanga, unofanirwa kunyorera vhiza. Kune mhando dzakasiyana dzeVisa dzaungashandisa. Rudzi rwevisa raunoda zvinoenderana nechinangwa chekushanya
January 8, 2022 Demi utano, Noweyi
Iyo Norwegian hutano hwehutano hwakavakirwa pamisimboti yekuwanikwa kwepasirese, kuendesa matunhu, uye sarudzo yemahara yemupi. Pamusoro pemusoro wega wega, mari yeNorway pahutano hwehutano ndiyo yepamusoro pasirese. Wese nhengo yeNorwegian National Insurance
Ungawana sei basa kuNorway? Nhungamiro ipfupi kune wese munhu
November 15, 2021 Demi mabasa, Noweyi
Kana iwe uchitova nemvumo yekugara muNorway, kana iwe uri muNorway, EU, kana mugari weEEA, unogona kungoisa pasi kuti uverenge kuti ungawana sei basa muNorway. Kana iwe usina
Maitiro ekunyorera asylum muNorway? Vapoteri uye vanotsvaga hupoteri muNorway
August 30, 2020 Demi Noweyi, vapoteri
Uri kutsvaga kugara kuNorway, kana iwe uchida hupoteri kuNorway? Iwe unofanirwa kuzviedza, kana wadii kuedza? Pasina mubvunzo, Norway ndeimwe yenzvimbo dzakanakisa pasi pano. Zvakare, imusha kune zvimwe
Nzira dzekutakura muNorway
November 12, 2019 Demi tenderera, Noweyi
Norway ine tsika dzekare dzekufambisa mvura, asi mugwagwa, njanji, uye kutakura nendege zvakawedzera mukukosha mukati mezana ramakore rechi20. Nekuda kwehuwandu hwehuwandu hwevanhu, zvifambiso zvevoruzhinji zvakati wandei zvakavakwa mumaruwa eNorway, zvisinei nezvifambiso zvevoruzhinji mukati, nemaguta akapoteredza zvakanaka
November 12, 2019 Demi Noweyi
Norway inyika yeScandinavia inosanganisira makomo, echando, uye hwakadzika hwamahombekombe egungwa. Oslo, guta guru, iguta rine nzvimbo dzakasvibira uye miziyamu. Yakachengetedzwa yezana ramakore rechi9 Viking ngarava inoratidzwa paOslo's Viking Ship Museum. Bergen, ine dzimba dzematanda ane mavara, ari